Cutlery Sets Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy entana i China Cutlery
Cutlery dia midika zavatra betsaka amin'ny fijery ankapobeny ny latabatrao, manampy atmosfera sy fahafinaretana bebe kokoa isaky ny sakafo, maneho ny fiheverana ny fiainantsika na dia ny fiaraha-monina iray manontolo aza. Pretty Shiny Gift Inc., manome karazana setrasy isan-karazany ao anatin'izany antsy ambony vy 304, fork, sotro, mololo haharitra mandritra ny androm-piainanao, na fironana sy fanao farany amin'ny mololo PLA biodegradable, boaty fisakafoanana mololo voajanahary voajanahary. izany fanampiana an-tany izany rahampitso mazava kokoa. Ny fitaovana rehetra dia ankatoavin'ny FDA, tsara ho an'ny trano sy lakozia, ary koa trano fisakafoanana sy fisotroana, sekoly na fitsangatsanganana an-kalamanjana avy amin'ny karazana kojakoja fangaro mifangaro. Tonga amin'ny fomba samy hafa mba hahitanao izay tadiavinao, na inona na inona toe-javatra, ary manana safidy marobe isika isaky ny taranja rehetra. Amin'ity sanganasa mahafinaritra ity dia azonao atao ny manasa ny latabatrao amin'ny cutlery vaovao napetraka ao amin'ny SJJ, ny fandraisana sokitra na ny pirinty fanontana dia raisina am-pitiavana. Mifandraisa aminay izao mba hanampy fomba vitsivitsy amin'ny latabatra fisakafoanao miaraka amin'ny setran'ny kojakojanay!
Kopa misotro plastika azo ampiasaina
Amboara azo ahodina Silika
Tantsaha fisotro taratasy tsy azo ovaina
Stainless vy Cutlery napetraka
Koba gilasy vy
Ahitra PLA azo ovaina
Vata fisakafoanana amin'ny trondro, Sets Cutlery